न्याय र दयाको सद्भाव - Love of God - Nepal
पोस्ट गरिएका मार्च 01, 2022 द्वारा Adrian Ebens भित्र Apologetics
140 प्राप्त हिट्सहरु
हामीले पहिले छलफल गरिसकेझैं, शैतानले ख्रीष्टले उसलाई दिनुभएको वरदानहरू जुन उसले स्वाभाविक रूपमा आफैंबाट पाएको थियो भनेर देख्न सुरु गर्यो। उहाँ परमेश्वरको पुत्रलाई खुशी दिन आएका थिए र अन्ततः उहाँलाई हत्या गर्न योजना बनाउने ठाउँमा पुग्यो। शैतानले कसरी आफ्नो आक्रमणको योजना बनायो त्यो सिंहको ओडारमा दानियल र अब्शालोमको कथामा उल्लेखनीय रूपमा देख्न सकिन्छ।
हामीले अध्याय ६ मा छलफल गरेझैं, शैतानको विश्वासले उसको जीवन आफैबाट आएको हो भनी उसले व्यवस्थालाई कसरी बुझ्यो भन्ने कुरामा परिवर्तन भयो। यहीँबाट विकृति प्रकट हुन थाल्यो ।
कानुनको आड़मा हानिको युक्ति रच्ने अधर्मको सिंहासनले तपाईंसँग संगति राख्ला र? भ.सं. ९४:२०(KJV)
शैतानले परमेश्वरको पुत्रप्रति महसुस गर्न थालेका विचारहरू हिंसातिर लागे।
तेरा चारैतिरका व्‍यापारद्वारा तँ उपद्रवले भरिइस्, र तैंले पाप गरिस्‌। यसैले मैले तँलाई परमेश्‍वरको पर्वतबाट अपमान गरी खेदिदिएँ, इजकिएल २८:१६
हिंसाको विचार भनेको विरोधको अभिव्यक्ति हो। शैतानले आफूसँग भएको जीवन र शक्ति आफ्नै हो भनी विश्वास गर्‍यो। उसले महसुस गर्यो कि परमेश्वरको पुत्र आफ्नो बाटोमा तगारो छ।
परमेश्वरको पुत्रलाई जित्नको लागि उसको कथित अन्तर्निहित शक्ति प्रयोग गर्ने विचार थियो। तैपनि उसले परमेश्वरको पुत्रलाई पासोमा पार्ने कुनै न कुनै तरिका खोज्नुपरेको थियो। हामी दानियलको कथामा टुक्राहरू पाउन सक्छौं।
सम्‍पूर्ण राज्‍यको शासन गर्नलाई एक सय बीस जना प्रान्‍तका बड़ाहाकिमहरू –नियुक्त गर्न दारालाई मन लाग्‍यो। तीमाथि तीन जना अध्‍यक्ष नियुक्त गरिए, जसमध्‍ये दानिएल एक थिए। राजाको काममा हानि नहोस्‌ भनेर ती प्रान्‍तका बड़ाहाकिमहरू उनीहरूप्रति उत्तरदायी गराइए। अब दानिएलले असाधारण गुणहरूद्वारा आफैलाई ती अध्‍यक्षहरू र प्रान्‍तका बड़ाहाकिमहरूका बीचमा यस्‍तो फरक देखाए कि राजाले तिनलाई सम्‍पूर्ण राज्‍यको शासक नियुक्त गर्ने योजना गरे। तब अध्‍यक्षहरू र प्रान्‍तका बड़ाहाकिमहरूले दानिएलको विरुद्ध अभियोग लगाउनका निम्‍ति सरकारी कामकारबाहीहरूमा तिनको दोष खोज्‍न लागे, तर त्‍यसो गर्न उनीहरू असमर्थ भए। उनीहरूले तिनमा कुनै पनि भ्रष्‍टाचार भेट्टाउन सकेनन्, किनभने तिनी विश्‍वासयोग्‍य थिए, र तिनी न त भ्रष्‍ट न लापरवाही नै थिए। अन्‍तमा ती मानिसहरूले भने, “हामीले यस दानिएलको विरुद्धमा अभियोगको लागि, उसका परमेश्‍वरको व्‍यवस्‍थासम्‍बन्‍धमा बाहेक, कुनै पनि आधार कहिल्‍यै पाउन सक्‍नेछैनौं।” यसकारण अध्‍यक्षहरू र प्रान्‍तका बड़ाहाकिमहरू एउटा समूह भई राजाकहाँ गएर भने, “हे महाराजा दारा, अमर रहून्‌! राजकीय अध्‍यक्षहरू, प्रान्‍तका बड़ाहाकिमहरू, इलाका अधिकारीहरू, राज्‍यपालहरू, र सल्‍लाहकारहरू, सबैले यो मन्‍जूर गरेका छन्,
कि राजाले एउटा आदेश निकाल्‍नुपर्छ र त्‍यस आदेशलाई लागू गर्नुपर्छ, जसअनुसार आगामी तीस दिनसम्‍म हजूरबाहेक कुनै देवता वा मानिसलाई कसैले प्रार्थना गरे भने, हे महाराजा त्‍यस्‍ता व्‍यक्ति सिंहको खोरमा फालिनेछन्‌। दानिएल ६:१–७
"दानियलमा उत्कृष्ट आत्मा थियो।" यो परमेश्वरको पुत्रमा भएको उत्कृष्ट आत्माको प्रतिबिम्ब हो। ख्रीष्टलाई सम्पूर्ण राज्यमा स्थापित गरिएको थियो। हामी देख्छौं कि दानियलको अधीनमा भएकाहरूले सीधै दानियलको सामना गरेनन् वा सीधै उसलाई हानि पुर्‍याएनन्, तर तिनीहरू राजाकहाँ गएका थिए जुन राजालाई सम्मान गर्न देखा पर्‍यो।
तिनीहरूले राजा बाहेक अरू कुनै देवतालाई बिन्ती नगर्ने आदेश दिन चाहन्थे। यो आदेशले राजाको हैसियत बढाएको देखिन्छ। दानियललाई नाश गर्ने उद्देश्य थियो। परमेश्वरको पुत्रको सन्दर्भमा, शैतान र उहाँसँग भएकाहरूले दानियललाई भएको जस्तै प्रभाव सिर्जना गर्न फरक तरिका प्रयोग गरे। यो अब्शालोमको कथामा पाइन्छ।
तिनी बिहान सबेरै उठेर सहरको मूल ढोकातिर जाने बाटोनेर उभिने गर्थे। अनि कुनै मानिस राजाकहाँ इन्‍साफ माग्‍न आउँदा अब्‍शालोमले त्‍यस मानिसलाई बोलाएर कुन सहरबाट आएको हो भनी सोध्‍थे। “हजूर, म इस्राएलको फलानो कुलको हुँ,” भनी जब तिनले जवाफ पाउँथे, तब अब्‍शालोमले त्‍यसलाई भन्‍थे, “तिम्रो मुद्दा त ठीकै रहेछ, तर तिम्रो मुद्दा सुन्‍ने राजाको कुनै प्रतिनिधि नै छैन।” अनि अब्‍शालोमले अझै यसो पनि भन्‍थे, “यदि म यस देशमा न्‍यायाधीश नियुक्त भएको भए यस्‍तो मुद्दा ल्‍याउने हरेक मानिसको ठीक इन्‍साफ गरिदिने मेरो कर्तव्‍य हुनेथियो।”
जब कुनै मानिस तिनलाई साष्‍टाङ्ग-दण्‍डवत्‌ गर्नलाई आउँथ्‍यो, तब अब्‍शालोमले आफ्‍नो हात पसारेर त्‍यसलाई समाती अँगालो हालेर म्‍वाइँ खान्थे। राजाकहाँ इन्‍साफ माग्‍ने हरेकसँग यस्‍तै व्‍यवहार गरेर अब्‍शालोमले इस्राएलीहरूको प्‍यार आफूतिर खिँचे। २ शमूएल १५:२–६
अब्शालोम नामको अर्थ शान्तिको पिता हो, तर यस नामको भित्र लुकेको घृणा र युद्धको चरित्र थियो। अब्शालोम आफ्नो बुबाले अब्शालोमकी बहिनी तामारलाई यौन दुर्व्यवहार गर्ने आफ्नो सौतेनी भाइ अम्नोनलाई सजाय दिन चाहन्थे। राजा दाऊदले अम्नोनको विरुद्धमा सजाय नदिएको हुनाले, अब्शालोमले आफ्नो बुबालाई तुच्छ ठाने र तिनलाई हटाउने निर्णय गरे। अब्शालोमले मामिलाहरू आफ्नै हातमा लिए र आफूले उचित ठानेको न्यायमा अम्नोनलाई मृत्युदण्ड दिए। त्यसपछि उनले इजरायलको राज्यको मन जित्न थाले।
तर अब्‍शालोमले फेरि जिद्दी गरे। यसैले दाऊदले अमनोन र अरू सबै राजकुमारहरूलाई तिनीसित जान दिए। अब्‍शालोमले आफ्‍ना मानिसहरूलाई यस्‍तो आज्ञा दिए, “मौका हेरिबस, अनि जब अमनोन मातेर मस्‍त भएका हुन्‍छन्‌ र म ‘अमनोनलाई मार्‌!’ भन्‍नेछु, तब तिमीहरूले उनलाई मार्नू। डराउने केही काम छैन। यो मेरो हुकुम हो। हिम्मत गरी दृढ़ बस।” अनि अब्‍शालोमका मानिसहरूले तिनले भनेझैँ गरे। तब सबै राजकुमारहरू हतार-हतार आ-आफ्‍नो खच्‍चरमा चढ़ेर घरतिर लागे।शमूएल १३:२७–२९
, जो मूल रूपमा लुसिफर थियो, परमेश्वरको पुत्रलाई आफूभन्दा माथि उचालिएको तथ्यबाट दुखी थियो। उनले आफूमाथि अन्याय भएको महसुस गरे र उनले परमेश्वरको पुत्रलाई पराजित गर्ने संकल्प गरे।
उहाँका पिताले सबैलाई स्पष्ट पार्नुभएको थियो कि सबै स्वर्गदूतहरूले परमेश्वरको पुत्रको आराधना गर्नुपर्छ।
र जब उहाँले आफ्नो सर्वोच्च पुत्रलाई संसारमा ल्याउनुभयो, परमेश्वरले भन्नुभयो, "परमेश्वरका सबै स्वर्गदूतहरूले उहाँको आराधना गरून्।" हिब्रू 1:6 (NLT)
यो खण्डले ख्रीष्टको पृथ्वीमा आगमनलाई जनाउँछ, तर बीउ सिद्धान्तले हामीलाई स्वर्गमा युद्धको सुरुवात तिर लैजान्छ।
ताकि सबैले पुत्रको आदर गरून्, जसरी तिनीहरूले पिताको आदर गर्दछन्‌। पुत्रको आदर नगर्नेले उसलाई पठाउनुहुने पिताको पनि आदर गर्दैन। यूहन्ना ५:२३
लुसिफरले यो स्विकार गर्न सकेन। उ परमेश्वरको राज्यलाई पराजित गर्न कटिबद्ध भए। उसले धेरै स्वर्गदूतहरूलाई आफ्नो पक्षमा पारे। अब्शालोमको कथामा जस्तै, हातमा रहेको मुद्दा न्यायको थियो।
अनि अब्‍शालोमले अझै यसो पनि भन्‍थे, “यदि म यस देशमा न्‍यायाधीश नियुक्त भएको भए यस्‍तो मुद्दा ल्‍याउने हरेक मानिसको ठीक इन्‍साफ गरिदिने मेरो कर्तव्‍य हुनेथियो।” २ शमूएल १५:४
अब्शालोमको आलोचना यो थियो कि राजाले आफ्ना प्रजाहरूलाई न्याय प्रदान गर्दैनन्, तर यो दाबी गलत थियो। पहिले शमूएलको पुस्तकमा हामीले पढ्यौं:
दाऊदले सारा इस्राएलमाथि राज्‍य गरे, र आफ्‍ना सबै प्रजाका निम्‍ति जे-जति ठीक थियो, त्‍यही गरे। २ शमूएल ८:१५
दाऊदले आफ्ना प्रजाहरूलाई न्याय दिइरहेका थिए, तर अब्शालोमले सोचे जस्तो न्याय आवश्यक थिएन। दाऊदले कृपा देखाए किनभने परमेश्वरको कृपा उहाँसँग थियो र आफ्नो राज्य स्थापना गर्नुभयो:
त्‍यसले नै मेरो नाउँको निम्‍ति एउटा भवन बनाउनेछ, र म त्‍यसको राजकीय सिंहासन सधैँको निम्‍ति स्‍थिर गर्नेछु। म त्‍यसका पिता हुनेछु, र त्‍यो मेरो छोरो हुनेछ। त्‍यसले अधर्म गर्‍यो भने, मानिसको लट्ठीले म त्‍यसलाई सजाय दिनेछु, र मानिसहरूद्वारा त्‍यसलाई कोर्राबाजीको प्रहार गर्नेछु। तर मैले मेरो प्रेम शाऊलबाट हटाएझैँ, जसलाई मैले तेरो बाटोदेखि पन्‍छाएँ, म मेरो प्रेम त्‍यसदेखि कहिल्‍यै हटाउनेछैनँ। तेरो घराना र तेरो राज्‍य मेरो सामुन्‍ने सधैँभरि रहिरहनेछ, र तेरो सिंहासन सदासर्वदाको लागि स्‍थिर हुनेछ’।” २ शमूएल ७:१३–१६
अब्शालोम कृपा देखाउने न्यायमा निर्माण भएको राज्य चाहँदैनथे। उनी गल्ती गर्नेलाई दया नदिई मृत्युदण्ड दिने न्याय चाहन्थे। हामी दानियलको कथामा देख्छौं, यो राज्यमा अख्तियारको तेस्रो व्यक्ति थियो, राजा र मानिस पछि राजाको दाहिने हात, जसले राजालाई अवफादारीको लागि मृत्युको आदेश पेश गर्यो।
लुसिफरले न्यायको नयाँ सिद्धान्तलाई प्रतिस्थापन गर्न थाले जसले अपराधीलाई सजायको माग गर्यो। यो उसले कानूनको माध्यमबाट काम गरेको दुराचार थियो।
परमेश्वरको व्यवस्था जीवन र स्वतन्त्रताको नियम थियो। जसरी पिता एक मात्र व्यक्ति हुनुहुन्थ्यो जो जन्मजात अमर हुनुहुन्थ्यो र उहाँको पुत्रले उहाँको पिताको प्रेम र सम्मानद्वारा यो अमरता प्राप्त गर्नुभयो, बाँकी सबै स्वर्गदूतहरूलाई यो जीवन परमेश्वरको पुत्रद्वारा क्षण-क्षणमा दिइएको थियो।
लुसिफरले कानूनलाई एक कोडको रूपमा पुन: प्रस्तुत गरे जुन स्वर्गदूतहरूले पालन गर्नुपर्छ र जसले पालन नगर्नेहरूलाई दण्डित गर्नुपर्छ। यसैलाई उनले न्याय भनेका छन् । यो परमेश्वरको न्याय भन्दा फरक थियो। निम्न पाठलाई ध्यान दिनुहोस्।
धार्मिकता र न्याय तपाईंको सिंहासनको बासस्थान हो: दया र सत्य तपाईंको अनुहारको अगाडि जानेछ। भजन ८९:१४ (KJV)
यो बाइबल पाठ एक शास्त्रिय हिब्रू वाक्य संरचना हो। दोस्रो वाक्य पहिलोको विस्तार हो। यसले पहिलो भागका सिद्धान्तहरूलाई विस्तारित तरिकामा पुनः सङ्गठन गर्दैछ। यसरी ईश्वरीय ढाँचाले काम गर्दछ। यसबाहेक, अंग्रेजी विराम चिन्हले पनि यो सिद्धान्त प्रदान गर्दछ। सिंहासन शब्दको पछिको कोलोन भनेको अर्को के आउँछ त्यो बृहदान्त्रको अगाडि के छ भनेर व्याख्या गर्दैछ।
१. न्याय र न्याय तपाईंको सिंहासनको बासस्थान हो
२. दया र सत्य तपाईको अनुहार अगाडि जानेछ
यो भनेको के हो भने धार्मिकतालाई दयाको रूपमा र न्यायलाई सत्यको रूपमा अभिव्यक्त गरिन्छ। यो ईश्वरीय ढाँचामा पूर्ण रूपमा सामेल हुन्छ। न्याय गर्नु सही कुरा हो, र परमेश्वरले गर्नुहुने सही कुरा कृपा देखाउनु हो।
लुसिफरले आफ्नो विपक्षी ढाँचालाई दयाको विपरीत न्याय बनाउन प्रयोग गरे। न्याय भनेको सजाय हो र आवश्यक भएमा मृत्यु। दयाको अर्थ दण्डको स्थगन वा सजाय अर्कोलाई हस्तान्तरण गर्नु हो। शैतानले हरेक पापलाई सजाय दिनैपर्छ र यदि परमेश्वरले दण्ड छुटाउनुहुन्छ भने, उहाँ सत्य र न्यायको ईश्वर हुनुहुन्न भन्ने धारणा प्रस्तुत गर्‍यो।
हामी अब्शालोमको कथामा देख्छौं कि उसले इस्राएल राष्ट्रको हृदय चोर्न सफल भयो।
त्यसैले अब्शालोमले इस्राएलका मानिसहरूको मन चोरे। २ शमूएल १५:६
त्यसै गरी लुसिफरले सबै स्वर्गदूतहरूलाई न्याय र दयासँग व्यवहार गर्ने नयाँ तरिकामा सार्न सफल भयो। यसले उनीहरूले पूर्ण रूपमा बुझ्यो कि परमेश्वरलाई साँचो आदरको मतलब पिताको अनादर गर्नेहरूका लागि मृत्युको आदेश हुनुपर्छ। तिनीहरूले शैतानको तर्कलाई परमेश्वरको सम्मानको रूपमा देखे, यसले परमेश्वरको शासनलाई कमजोर पार्छ भनेर बुझेनन्।
शैतानले प्रस्तुत गरेको यो सिद्धान्त परमेश्वरको लागि घृणित थियो। उहाँको चरित्र दयालु, कृपालु, सहनशील र भलाइ र सत्यमा प्रशस्त थियो। (प्रस्थान ३४:६)।
हामी दानियलको कथामा देख्छौं, यो राजा होइन जसले अवफादारीको लागि मृत्युको आदेश पेश गर्यो, यो राज्यमा तेस्रो व्यक्ति र उनीभन्दा तलका केही थिए।
परमेश्वर मृत्युको लेखक हुनुहुन्न। मृत्यु परमेश्वरको शत्रु हो; मृत्यु जीवन, स्वतन्त्रता र स्वतन्त्रताको कानूनको विरुद्धमा छ। यदि परमेश्वरको व्यवस्थामा मृत्युको आदेश थियो भने त्यहाँ स्वतन्त्रता हुन सक्दैन। यदि तपाईं सही काम गर्न असफल हुनुभयो भने सजायको लागि डरलाग्दो हेराइ मात्र हुन सक्छ।
बाइबलले शैतानलाई मृत्युको प्रभुत्व र शक्तिको रूपमा प्रस्तुत गर्दछ, ईश्वरले होइन।
किनकि छोरा-छोरीहरू मासु र रगतका सहभागी भएका हुनाले उहाँले पनि त्‍यही स्‍वभाव लिनुभयो, ताकि मृत्‍युद्वारा नै मृत्‍युको शक्ति भएकोलाई, अर्थात्‌ दियाबलसलाई उहाँले नष्‍ट गरून्, हिब्रू २:१४
यही विषयलाई हामीले अगाडि बढाउनु पर्छ। हामी सबैलाई सिकाइएको छ कि परमेश्वरको न्यायले अपराधीको मृत्युको माग गर्दछ। वास्तविकता यो हो कि यो शैतानको न्याय प्रणाली हो जुन परमेश्वरको व्यवस्थामा थोपिएको छ। जीवनको नियम, स्वतन्त्रता र स्वतन्त्रतालाई मृत्युसँग जोड्न सकिँदैन। परमेश्वरको न्याय दया देखाउनु हो। शैतानले न्याय र दयालाई एकअर्काको विरोधमा बनायो।
पापलाई बलपूर्वक दण्डित गर्नुपर्छ र यो परमेश्वरको सरकारलाई सुधार्नको लागि हो भनी स्वर्गीय स्वर्गदूतहरूलाई विश्वास दिलाउन उसले व्यवस्थालाई पुन: तयार गर्यो।
A. Ebens • मार्च 01, 2022 • 141 हिट्स (दानियल ७:८) सानो सीङ्ग को होॽ - भाग एक
L. Beachy • अगस्त 17, 2021 • 324 हिट्स प्रस्थान ३३:१४ अनि परमप्रभुले भन्‍नुभयो, “मेरो उपस्‍थिति तँसँग…
K. Mullins • जुलाई 27, 2021 • 348 हिट्स पृथ्वीमा मानिसको प्रभुत्व
A. Ebens • मे 28, 2021 • 404 हिट्स परमेश्वरको प्रेम एक भस्म गर्ने आगो जस्तो हो
K. Mullins • फेब्रुवरि 05, 2021 • 477 हिट्स आफ्ना शत्रुहरूलाई प्रेम गर्नुहोस्
K. Mullins • अप्रिल 28, 2021 • 408 हिट्स खुसीको विवाह
A. Ebens • मे 28, 2021 • 404 हिट्स उहाँले तिनीहरूलाई कहिले पनि माथि जानु र लडाई गर्न वा कुनै पनि…
Jeremiahtwo • मे 13, 2021 • 381 हिट्स (प्रकाश १:१०) "प्रभुको दिन" र प्रारम्भिक क्रिश्चियन चर्च द्वारा…
K. Mullins • जुलाई 27, 2021 • 348 हिट्स प्रस्थान ३३:१४ अनि परमप्रभुले भन्‍नुभयो, “मेरो उपस्‍थिति तँसँग…